Lamba ampiasaina in-bahoaka ankamaroan'ny toerana (anisan'izany ny hopitaly, trano fitaizana ny be antitra, sekoly, fiangonana, efitrano malalaka, teatra, sy ny maro hafa.) No takina mba ho fanamarinana ara-panjakana toy ny lelafo retardant. Tsy mitovy amin'ny firenena fitsipika momba ny lelafo retardancy.
UK: BS 5867-2: Flammability fitsapana ho an'ny damba ny lay sy ny drapes
Ny lamba dia pitsapana aloha sy aorian'ny manadio.
Ny santionany dia nametraka lamba mitsangana amin'ny metaly filanjana azy. Ny toe metaly manana refy roa marika. Ny lelafo dia ampiharina amin'ny lamba ambonin'ny ho 10 segondra.
Results: Ny lamba mandalo FR io fitsipika raha toa:
1) .Ny fanamarihana toerana voalohany, dia tsy nanapaka ny lelafo;
2) .Ny lelafo tsy handoro ny alalan 'ny sisin'ny ny vy filanjana.
Ny lamba dia pitsapana aloha sy aorian'ny manadio ( 12 tsingerina ny BS EN ISO 10528 Standard ny fisasana ny paika amin'ny 75 ° C, ary avy eo dia-dalana, maina).
Ny santionany dia nametraka lamba mitsangana amin'ny metaly filanjana azy. Ny lelafo dia ampiharina amin'ny lamba ambonin'ny ho 15 segondra.
1) .Ny lelafo tsy handoro ny alalan 'ny sisin'ny ny vy toetsika
2) .There tsy mirehitra ireo vongan-.
Type C (fenitra ambony indrindra):
Ny lamba dia pitsapana aloha sy aorian'ny manadio. ( 50 tsingerina ny BS EN ISO 10528 Standard ny fisasana ny paika amin'ny 75 ° C, ary avy eo ny hafanana ambany ary avy eo hidaraboka maina.)
Ny santionany dia nametraka lamba mitsangana amin'ny metaly filanjana azy. Ny lelafo dia ampiharina amin'ny lamba ambonin'ny ho 5 segondra, 15 segondra, 20 segondra sy 30 segondra.
1) .Ny rehefa lelafo sy ny sombin'ny famirapiratan'ny tsy mihoatra ny 2.5 segondra;
2) .Ny lelafo tsy handoro ny alalan 'ny sisin'ny ny vy toetsika
3) .There tsy mirehitra ireo vongan-.
LONGWAY Flame retardant efitra lamba lamba mifanaraka amin'ny BS5867-2 Type C fepetra.
NFPA (US National Fire Fiarovana Association) dia manana ny fitsipika samihafa arakaraka ny fomba ny lamba no ampiasaina. Ho an'ny draperies, ambainy, ary mitovy mihantona lamba, ny fitsipika dia mihatra NFPA 701 : Standard Fomba afo fitsapana ho Flame Hampielezana Textiles sy Films.
NFPA 701 Test Method iray (mety ho an'ny latsaky ny 700gsm lamba na 21oz / toradroa tokotany ): santionany dia tratran'ny pitik'afo lelafo ho 45 segondra. -Nitranga NFPA Test 701 Method One,
1) .Ny levitra eo ho eo ny santionany dia ho 40% na latsaka ary
2) .Fragments ny residues ny santionany izay latsaka amin'ny fakam-panahy efi-trano dia tsy haharitra handoro ny mihoatra ny 2 segondra.
NFPA 701 Test Method roa (mety ho an'ny lamba over700gsm na 21oz / toradroa tokotany ): a lelafo no ampiharina eto ambany ny ambany lelan-specimen ny roa minitra ary avy eo niala. -Nitranga NFPA Test 701 Method roa,
1) .Any specimen tsy tokony hanohy mirehitra ho an'ny mihoatra ny 2 segondra aorian'ny fitiliana dia revmove lelafo avy amin'ny fifandraisana amin'ny specimen;
2) .Ny Char halavan'ny specimen fisaka misy tokana tokony tsy mihoatra ny 435mm (17.1 in); fa mivalona specimen 1050mm (43.1 in);
3) .Any ampahany na residues ny santionany latsaka ny floorof ny fitaovana fitiliana dia tsy tokony hanohy may solon'ny mihoatra ny 2 segondra taorian'ny nahatratra ny tany.
Manadio sy ny Rano Leaching Fandidiana : Raha misy mpanamboatra milaza ny lamba mitana ny lelafo fanoherana rehefa avy manadio na weathering, ny fitaovana, dia hiara-hotsapaina rehefa izany dia efa iharan'ny ny hatsiaka toe-piainana izay ampiharina ho any amin'ny natao fampiasana, maina ny fanadiovana (3 tsingerina) , famotsiam-(5 tsingerina) na hatsiaka ny rano (revo tanteraka amin'ny fisotroana rano misy paompy amin'ny efitrano mari-pana fa tsy latsaky ny 72 ora).
Ankoatra ny ambony sy Etazonia UK fenitra, dia misy fitsipika hafa ao samihafa countries.In Eoropa sy Aostralia, ny fitsipika nekena indrindra ao amin'ny orinasa dia ny Frantsay, Alemana sy Britanika fitsipika. Vao haingana, koa ny Eoropeana EN 13773 fitsipika ho an'ny lay no lasa mahazatra kokoa.
Alemaina: Din 4102
Frantsa: NFP 92-503
Post fotoana: Sep-17-2018